Kuchinja nhandare dzendege kuva Bhiriyoni Dhora mari mikana yemaguta eU.S.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Kuchinja nhandare dzendege kuva Bhiriyoni Dhora mari mikana yemaguta eU.S.
nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • kutakura • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo COVID-19 denda yakaisa nyowani yemari kushungurudzika kune dzimwe nyika nehurumende dzemunharaunda. Chimwe chishandiso chinogona kuvabatsira kutsungirira chinonzi "asset monetization," dzimwe nguva inonzi "zvivakwa zvekushandisa zvakare." Sezvinoitwa neAustralia uye mashoma ehutongi hweUS, pfungwa ndeyekuti hurumende itengese kana kubhadharisa zviwanikwa zvinoburitsa mari, kuvhura tsika yavo kuti ishandiswe kune zvimwe zvinangwa zveveruzhinji.
Zvichienderana nedata kubva kutengesheni yendege yapfuura uye marefu-maoreisi epasi rese, ongororo inoratidza kuti muHawaii chete nhandare mbiri dzakakura dzinogona kusvika kumadhora 3.6 bhiriyoni dzakabatanidzwa kuburikidza nechikwereti chenguva refu kumakambani akazvimirira eairport nevashambadzi, senge FRAPORT fkana muenzaniso.
Chidzidzo ichi chinowana kuti muHawaii moga Honolulu's Daniel K. Inouye International Airport inogona kuburitsa $ 2.7 bhiriyoni uye Kahului Airport paMaui inogona kuwana $ 935 mamirioni kuburikidza nechikwereti chenguva refu.
Nekudaro, nhandare dzinodarika madhora zviuru zviviri nezviuru mazana maviri nechikwereti. Mushure mekubhadhara mabhendi ehurumende aripo panhandare yendege, sezvaidikanwa nemutemo wezvematongerwo enyika sechimwe chikamu chebvumirano, mambure ehurumende anobva mukurendesa kwenguva refu kwendege mbiri idzi angangoita madhora anosvika bhiriyoni imwe chete emadhora.
Pasi pemitemo yeUnited States yendege, varidzi vehurumende yendege havatenderwe kuwana chero yemari yemari yendege; mari dzese dzakadai dzinofanirwa kuchengetwa panhandare yendege uye dzinoshandiswa pazvinangwa zveairport. Kumhiri kwemakungwa, hakuna zvirambidzo zvakadaro. Mumakore makumi matatu apfuura, hurumende zhinji dzakashambadzira kana kushambadza nhandare hombe nepakati uye dzakagamuchira rubatsiro rwemari nekuita izvi.
Mu2018, sechikamu chemutemo unobvumidza iyo Federal Aviation Administration, Congress yakagadzira chakakosha kunze kwekurambidzwa kwenguva refu. Chirongwa chitsva cheAirport Investment Partnership Program (AIPP) chinogonesa varidzi vemahofisi ehurumende kupinda muzvibvumirano zvenguva refu zveveruzhinji-zvakazvimirira (P3) - uye vashandise mari yereti yavanowana muzvinangwa zvehurumende.
Ichi chidzidzo chinoongorora kugona kwendege yeruzhinji-yakazvimiririra yekudyidzana marezenisi e31 makuru nepakati epakati nhandare nendege dzeguta, dunhu, nehurumende mamiriro. Iyo inotora pane data kubva kune akawanda emahombekombe emahombekombe eruzhinji-akazvimirira ekudyidzana mashandisirwo emabhizimusi mumakore achangopfuura kuyera izvo imwe neimwe yendege 31 inogona kuve yakakosha kune vanoita mari.
Kukosha kwakakomba ndiko kungave kwakakosha nendege mumusika wepasi rose. Iko kukosha kwemambure kunofunga nezve US tax kodhi kupihwa iyo inoda kuti iripo nhandare yendege yibhadharwe mune chiitiko chekuchinja kwekutonga, senge kwenguva refu-rease. Nekudaro, iyo net kukosha kukosha inofungidzira ihwo hwakazara kukosha kubvisa kukosha kweakatanhamara nendege zvisungo.
Sezvo kuregererwa kweP3 kwenhandare dzendege kusingawanzo muUnited States (muenzaniso chete uripo iSan Juan, nhandare yendege yePuerto Rico), chidzidzo ichi chinotsanangura zvikamu zvitatu zvevangangoita mari muzvikwata zveUS.
Chekutanga chinhu chiri kukura chenyika chemakambani enhandare yendege, kusanganisira epasi mashanu makuru mapoka enhandare, ayo anoshanda chikamu chinokura chenhandare hombe dzenyika nemari yegore.
Yechipiri yakawanda mari yezvivakwa yekudyara, iyo yakasimudza mazana emabhirioni emadhora ekudyara seyenzvimbo muzvivakwa uye P3-yakabhadhara zvivakwa zvivakwa pasirese.
Chikamu chechitatu ndechevanhu mari yemudyandigere, idzo dziri kuwedzera zvishoma nezvishoma mari yavo muzvivakwa mukuyedza kudzora kuderera muhuwandu hwavo hwekudzoka pazvirimwa.
Mhando dzese nhatu dzevashambadziri vane nguva yakareba yenguva uye vakasununguka kudyara mukati nekuenderera mberi nekukudziridza idzi mhando dzezvinhu.